ISA STYLE Vaovao
Ny lehilahy maranitra dia tsy maintsy voaravaka akanjo mahazatra lamaody. ISA ambony tank, tapaho ny eritreritrao. Ny lamba akorandriaka vita amin'ny landihazo 100% mamihina ny hoditrao ary manao izay hahamety ny fihetsinao tsirairay avy, tsy hahatsapa ho mahazo aina ianao ary mirongatra isaky ny manao azy. Na manao fanatanjahan-tena mafy aza ...
Mamorona maodely fanabeazana "orinasa, orinasa ary kolonely".
Isabella, mpanorina an'i Isa, dia mpampianatra maharitra miaraka amina fanabeazana ao amin'ny Jiangxi Vocational College of Tourism and Commerce varotra. Nanangana kilasy fiaraha-miasa eo amin'ny sehatry ny fiaraha-miasa eo amin'ny sekolim-pianarana izy mba hizaha ny fiheverana ny fampianarana arak'asa ambony miaraka amin'ny ...
Nandany 2 taona ny ISA mba hanamboarana fomba 300 mihoatra ny safidinao. Azonao atao ny mampiditra ny volavolao amin'ireto style ireto sy mifanentana amin'ireo kojakoja ilainao hampiavaka ny tenanao.
Nandany 2 taona ny ISA mba hanamboarana fomba 300 mihoatra ny safidinao. Azonao atao ny manampy ny volanao amin'ireto style ireto sy mifanentana amin'ireo kojakoja ilainao hampisehoana ny endrika tsy itovizanao.20 + endrika vaovao isan'andro. Nanamboatra fomba isan-karazany ho an'ny akanjo tsirairay izahay mba hampisehoana ny fitafianao bebe kokoa ...
Na lamba na fomba io, dia manatsara sy manatsara hatrany hatrany izahay hanomezana fahafaham-po ny filan'ny olona maro kokoa.
amin'ny alàlan'ny admin amin'ny 21-03-24
Mikasika ny fomba fitafiana, dia mora tohina amin'ny vanim-potoana rehetra izahay, ary hampivelatra sy hamolavola fomba vaovao mifanaraka amin'ny fironana amin'ny tsena sy ny fironana amin'ny tsena hihaona amin'ny fangatahan'ny tsena sy ny estetika ampahibemaso. c ...
Fanadihadiana ny satan'ny fanondranana sy ny firoboroboan'ny indostrian'ny lamba sy ny akanjo any Shina amin'ny taona 2020 Ny isan'ny fanondranana ny indostrian'ny lamba dia nitombo mihoatra ny 9%
Taorian'ny fandrosoana an-taonany maro, ny indostrian'ny lamba sy fitafiana ao amin'ny fireneko dia manana tombony azo amin'ny fifaninanana mazava, manana rojo indostrialy feno, ary vondron-indostrialy mandroso maro. ny fireneko dia firenena lehibe famokarana lamba sy fanondranana. Ny fanondranana ankapobeny ny firenen'ny fireneko an ...
Fanadihadiana momba ny satan'ny tsena sy ny vinavinany fampandrosoana ny indostrian'ny akanjo ho an'ny olon-dehibe ao Shina amin'ny taona 2020.
1.Ny tombam-bidy ankapobeny ho an'ny indostrian'ny fitafiana ho an'ny olon-dehibe any Shina dia mampanantena amin'ny ho avy Tao anatin'ny taona vitsivitsy, noho ny fironana amin'ny fanjifana akanjo manokana, nanjary nalaza teo amin'ny mpanjifa ny fitafiana mahazatra, izay nampiroborobo ny fanitarana ny akanjon'ny olon-dehibe .. .